amabhange Iningi ozama ancike amaklayenti nelungelo. Lokhu kuyaqondakala, ngoba ngokuvamile kakhulu ukunikeza ngenzuzo enkulu sezinhlangano eziphambili zezezimali. Mina yayiphumula futhi VTB - ibhange, eye yathuthuka kwemikhiqizo embalwa ehlukile VIP-amaklayenti. Omunye wabo kwakungu-iphakheji Amatebhe ka "Ilungelo" Lokukhuluma (VTB). Kuyini kwale sevisi? Futhi lokho amandla inikeza amaklayenti asebhange?
Incazelo emfushane uhlelo
Iphakheji "Ilungelo" Lokukhuluma VTB-24 - uhlu lokukhethwa kukho ekhethekile, obadalwa ikakhulukazi abantu asetshenziswa ngubani ukuba ugcine isikhathi sifisa ukuphila ukuphila kwakho kuya esiphezulu.
Kukholakala ukuthi le sevisi kusekelwe izingxenye ezintathu, okuhlanganisa induduzo nesivinini yesevisi, kanye amadili best kusuka isikhungo credit. Cabanga bonke laba izingxenye ngokuningiliziwe.
Ngokusho ebhange, iphakheji "Ilungelo" Lokukhuluma VTB-24 yakhelwe for labo abasebenzisi abazazisayo njalo ngomzuzu. Njengomthetho, kuba osomabhizinisi, osopolitiki, amalungu abaholi elite futhi ibhizinisi, ngubani zaveza njalo ngomzuzu.
Lokho zonke lezi amakhasimende uzizwa ukhululekile, VTB necebo izimo ezikhethekile wokubambisana ngabo. Ngokwesibonelo, ukuze afeze noma iyiphi imisebenzi ne-akhawunti, amakhadi noma ukuvikeleka kwamasheya abahlanganyeli project akudingeki mathupha iya ebhange bese ugcwalisa isethi ejwayelekile kwemibhalo. Zonke ongakhetha kuyenziwa ukude. Futhi okubaluleke nakakhulu, ukuthi bonke ukudluliselwa imali abazenzi ngokushesha okukhulu futhi usebenze ukusuka noma kuphi emhlabeni.
Ngenxa okuyinto kukhona isixazululo ngokushesha izinkinga amakhasimende '?
"Ilungelo" Lokukhuluma iphakethe of VTB-24 ngokulinganayo okusheshayo isebenza kubo bonke amakhasimende ayethanda. Lokhu kufezwa ngokusebenzisa isingeniso kanye nokusetshenziswa ezihlukahlukene amasevisi kanye namathuluzi. Omunye wabo ibhange ucingo. Nguye kusiza ukuba afeze imisebenzi kuphi. Into esemqoka ukuthi kwaba eduze khulula ucingo umugqa.
Iphuzu elibalulekile yesibili ukudala indawo yesevisi ekhethekile, lapho VIP-amaklayenti zamukelwa ngaphandle emigqeni futhi jostling. Indima ebalulekile service ngesivinini udlala intanethi futhi ikhono ukuvuselela yayo umugqa wesikweletu nayo. Futhi-ke, VIPs ngeke akwenze ngaphandle inkonzo concierge, enza zonke izinhlobo ukuhlela amasevisi egameni umsebenzisi. Ngokwesibonelo, ingasetshenziswa ukubhuka amathikithi, ukubhuka ehhotela kanye ukukhokhela umsebenzi yokuhlanza nokunye. D.
ukusebenza kalula nge izimali - ukuthula kwakho kwengqondo futhi comfort zone
Wonke umuntu ngaphambilini amaphasela VTB "Ilungelo" Lokukhuluma ungakhululeka futhi unethezeke. Kusho ukuthini? Okokuqala, cabanga siqu nomphathi wakho nenhlalakahle, ikhono thola futhi enze isinqumo esifanele. Ezimweni eziningi, uzothola naye iseluleko lochwepheshe futhi izixazululo inkinga. Libuye bakwazi ukuzilungiselela tinhlobo letehlukene izivumelwano kanye imibhalo edingekayo ukuze kube isiphelo sesimiso isivumelwano, ezifana supply kwezimpahla.
Ngaphezu kwalokho, abanikazi "Ilungelo" Lokukhuluma iphakethe angase athole eyengeziwe ikhadi Priority Pass. Futhi yena, kuyobe ubavumele ukuba uvakashele ukhululekile yabagibeli ibhizinisi zezindiza zamazwe. Leli khadi itholakala kuphela ukuvakashelwa ezimbili khulula ngenyanga. Kunalokho, umnikazi ikhadi kungaletha umngane ongelona iklayenti ebhange.
Ekugcineni, iphakheji ye "Ilungelo" Lokukhuluma VTB inikeza amalungu ayo futhi umshwalense nemindeni yabo Ukusabalala sisohambweni. Kulokhu, lo lokumiswa umshwalense ukuze iklayenti isikhungo sezezimali kungadingeka kulezi zimo ezilandelayo:
lapho yayikhona simo esikhungathekisayo futhi kwakudingeka usizo lokuqala;
ngesikhathi kuhoxiswa noma ukubambezeleka;
at ukulahlekelwa imithwalo;
phakathi ukuhlukumeza amalungelo kuhilele ecaleni elimayelana nezakhamuzi.
Ukuvikelwa Womshuwalense we umsebenzisi namalungu omndeni wakhe evumelekile izinsuku ezingu-90 kusukela ngosuku kokuhamba phesheya. Lezi izimo lakala amakhasimende VTB Bank. "Ilungelo" Lokukhuluma iphakethe kulokhu kusiza ukuvikela hhayi kuphela, kodwa futhi nabathandekayo babo izimo ezingalindelekile ngesikhathi hambo.
Yiziphi izinzuzo yasebhange inthanethi?
Ngenxa isevisi yasebhange, abasebenzisi kalula imisebenzi ehlukahlukene ngemali ukubolekisa kanye imali. Bona banethuba eliyingqayizivele ukushintshashintsha amazinga kanye Tinsita lokukhokha noma isevisi yeselula. Kodwa okubaluleke kakhulu, sinikeza VTB - "Ilungelo" Lokukhuluma iphakheji ephakeme idiphozi amazinga, lokuthi ukhethe exchange rate kanye ukungabikho ikhomishini izimali at ukusebenza ukuthengiselana ehlukahlukene yezezimali.
Uyini iphakethe inzuzo?
Main izinzuzo iphakethe yikhono ukwandisa lokutshala izimali zabo. Ngokwesibonelo, ukutshala ezithile imikhiqizo utshalomali kungenzeka kunemibandela ethile. Ikakhulu, i-Bank inikeza amaklayenti ayo amasevisi "Online Broker", zisekela ngokugcwele kohlaziyo, inikeza ukufinyelela amapulatifomu ezahlukene lwemali ezimakethe zomhlaba jikelele futhi ivula i-akhawunti ngabanye utshalomali.
Ngaphezu kwalokho, wonke umuntu angakwazi ukusebenzisa i-amasevisi utshalomali siqu umeluleki, noma bahlanganyele ukutshalwa bebodwa. Kulo mBhalo, kucatshangwa esifushane ukuqeqeshwa izifundo professional nokufundisa portal ngokuthi "Ukuhweba School".
Ngaphezu kwalokho kulesi sikhungo amaklayenti zezimali ukufinyelela amakhadi ibhonasi nge 5% ekuqongeleleni (cash emuva), ungasusa nigcwalise akhawunti abo ngaphandle kwemingcele. Babuye elinde izaphulelo (kufika ku-40%) lapho uthenga izimpahla namasevisi abalingani ebhange. Sinenkosi ikhono ukuvula ikhadi lesikweletu 18% th izinga ngonyaka nokuthenga collectible izinhlamvu zegolide nezesiliva ezinekhanda okumele kuqalwe.
VTB "Ilungelo" Lokukhuluma (iphakethe): Izibuyekezo
Njengoba yethula iphakethe "Ilungelo" Lokukhuluma yabangela izingxoxo. Abanye abantu ethanda service, futhi umuntu engazange kwadingeka isikhathi sokuhlaziya kuwufanele yayo. Ngokwesibonelo, abanye abasebenzisi niyikhulume ukutshalwa yimpumelelo, eyabasiza ukuba enze "Ukuhweba School" nomsizi. Ngokusho kwabo, iminyaka engu-2 bakwazi ukwandisa inhloko-dolobha yabo ngisho ukuthenga umuzi omusha.
Abanye bathi ngosizo iphakethe behluleke imali ebolekiwe ngesikhathi nokwenza anikelele nosonhlamvukazi. Abanye bathi ukungabi oluphelele emigqeni futhi inkonzo okusheshayo. Okwesine, kunalokho, unganelisekile izinga lenkonzo futhi isimiso Telebank. Ngokusho kwabo, kwadingeka balindele kakhulu kuze kube zonke izinkokhelo ayehloselwe. Okwesihlanu ayithandi ukubambezeleka yokuxhuma amasevisi athile akhethekile. Anikeza imbuyiselo ku iphakethe, njengoba kwakuthenjisiwe izinhlelo yasebhange azikaze ukuyithola.
Yiziphi izinzuzo isevisi?
Njengoba ubona, kukhona ngobuciko izimpendulo eziningi ezihlukahlukene. Kodwa naphezu kwalokhu, lolu hlelo VTB has eziningi eziwusizo:
ijubane isevisi ngaphandle emigqeni futhi wamaphepha engadingekile;
ukwenza kwemali ukude;
ukubhalisa ukubolekisa kanye imali emigomeni eyamukelekayo;
ukusetshenziswa umsizi ukuze baxazulule izinkinga zezimali kanye ukunqwabelana amafa utshalomali;
premium esikweletu nawemali (kufika ku 5 izingcezu);
iqhaza Ibhonasi izinhlelo kanye ukukhushulwa, nokunye. d.
Kungakhathaliseki kungase kusho, "Ilungelo" Lokukhuluma iphakethe uhlala ngokuvumelana negama layo. It ivumela VIP-amaklayenti zokuqgoka ngisho ngaphezu kwazo.
Cat unikina ikhanda layo futhi uyazenwaya izindlebe zakhe: izimbangela. Indlela ukuhlanza cat ezindlebeni ekhaya
Chalet Girl: ezinye umehluko wemisindo nemiqondo yamagama